ချစ်သူက ညစာစားမယ်လို့ပြောပြီး မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးနဲ့ စပရိုက်လုပ်ပြီး မထင်မှတ်ထားပဲ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာ ခံခဲ့ရတဲ့ အေးချမ်းမိုး – Suehninsi
ချစ်သူက ညစာစားမယ်လို့ပြောပြီး မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးနဲ့ စပရိုက်လုပ်ပြီး မထင်မှတ်ထားပဲ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာ ခံခဲ့ရတဲ့ အေးချမ်းမိုး
Sue | December 20, 2020 | ရသစုံ | No Comments
ဆရာဝန်မလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို နိုင်ငံကျော်အလှမယ်တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ အေးချမ်းမိုးကတော့ Miss Universe Myanmar 2013၊ Miss Grand Myanmar 2017 စတဲ့ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုကို ရရှိထားသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အေးချမ်းမိုးကတော့
အချစ်ရေးကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီးလည်း ပရိသတ်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြထားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း အေးချမ်းမိုးက သူမကိုအသက်ထက်ပိုချစ်တဲ့ ချစ်သူဆီကနေ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အေးချမ်းမိုးတို့ရဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အမှတ်တရလေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အေးချမ်းမိုးရဲ့ချစ်သူ
ကိုသက်ပိုင်က “The day I promised her that i will be with u till the end of my life. ဘဝအတွက် အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံး excited အဖြစ်ရဆုံး​နေ့​လေးတစ်​နေ့ပါ။ ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့က​လေး Aye Chan Moe နဲ့ တစ်ဘဝလုံး အတူဖြတ်သန်းဖို့အတွက် ပထမဆုံး​ခြေလှမ်းစတင်တဲ့​နေ့​လေးပါ။ တကယ်က ကျွန်တော် သူ့ကို ရက်၃၀၀ပြည့်အတွက် dinner date လို့ဘဲ​ပြောထားပြီး ချစ်ရတဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်း, ညီအစ်ကိုများ
နဲ့ မရမရ​အောင် ကြိတ်စီစဉ်ခဲ့ရတဲ့​နေ့​လေးပါ။” “အလွဲလွဲအ​ချော်​ချော်​တွေ ပွဲမစခင်မှာဖြစ်​ပေမယ့် Planအတိုင်း အကုန်ပြီး​မြောက်သွားလို့ အရမ်းကိုဝမ်းသာ​ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ အ​ပျော်ရဆုံးက​​တော့ Surpriseလုပ်ရခက်တဲ့ ကျ​နော့်ချစ်သူကို Surpriseလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အနားမှာရှိခွင့် လက်ထပ်ခွင့်ကို လက်ခံ​ပေးခဲ့လို့ပါ။ အရမ်းချစ်ပါတယ်​နော်က​လေး​ရေ…” ဆိုပြီး အမှတ်တရပြောလာခဲ့တာပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ အေးချမ်းမိုးကတော့ သူမရဲ့ချစ်သူဆီက တန်ဖိုးထားပြီး မြတ်နိုးစွာနဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ရတာကို လက်ခံခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း အေးချမ်းမိုးတို့ချစ်သူနှစ်ယောက် အမြန်ဆုံး ရွှေလက်တွဲလက်ထပ်နိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆရာဝနျမလေးတဈယောကျလညျးဖွဈသလို နိုငျငံကြျောအလှမယျတဈယောကျ ဖွဈတဲ့ အေးခမျြးမိုးကတော့ Miss Universe Myanmar 2013၊ Miss Grand Myanmar 2017 စတဲ့ အလှမယျပွိုငျပှဲဝငျတှကေနေ ပရိသတျအားပေးမှုကို ရရှိထားသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ အေးခမျြးမိုးကတော့
အခဈြရေးကိစ်စနဲ့ ပကျသတျပွီးလညျး ပရိသတျတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးခပြွထားပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခေါကျမှာလညျး အေးခမျြးမိုးက သူမကိုအသကျထကျပိုခဈြတဲ့ ခဈြသူဆီကနေ လကျထပျခှငျ့တောငျးခံခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အေးခမျြးမိုးတို့ရဲ့ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ အမှတျတရလေးနဲ့ ပကျသတျပွီး အေးခမျြးမိုးရဲ့ခဈြသူ
ကိုသကျပိုငျက “The day I promised her that i will be with u till the end of my life. ဘဝအတှကျ အမှတျတရအဖွဈဆုံး excited အဖွဈရဆုံးနလေ့ေးတဈနပေ့ါ။ ကြှနျတျောခဈြရတဲ့ကလေး Aye Chan Moe နဲ့ တဈဘဝလုံး အတူဖွတျသနျးဖို့အတှကျ ပထမဆုံးခွလှေမျးစတငျတဲ့နလေ့ေးပါ။ တကယျက ကြှနျတျော သူ့ကို ရကျ၃၀၀ပွညျ့အတှကျ dinner date လို့ဘဲပွောထားပွီး ခဈြရတဲ့ ရငျးနှီးတဲ့ သူငယျခငျြး, ညီအဈကိုမြား
နဲ့ မရမရအောငျ ကွိတျစီစဉျခဲ့ရတဲ့နလေ့ေးပါ။” “အလှဲလှဲအခြျောခြျောတှေ ပှဲမစခငျမှာဖွဈပမေယျ့ Planအတိုငျး အကုနျပွီးမွောကျသှားလို့ အရမျးကိုဝမျးသာပြျောရှငျမိပါတယျ။ အပြျောရဆုံးကတော့ Surpriseလုပျရခကျတဲ့ ကနြေျာ့ခဈြသူကို Surpriseလုပျနိုငျခဲ့ပွီး အနားမှာရှိခှငျ့ လကျထပျခှငျ့ကို လကျခံပေးခဲ့လို့ပါ။ အရမျးခဈြပါတယျနျောကလေးရေ…” ဆိုပွီး အမှတျတရပွောလာခဲ့တာပဲ
ဖွဈပါတယျ။ အေးခမျြးမိုးကတော့ သူမရဲ့ခဈြသူဆီက တနျဖိုးထားပွီး မွတျနိုးစှာနဲ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခံခဲ့ရတာကို လကျခံခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကလညျး အေးခမျြးမိုးတို့ခဈြသူနှဈယောကျ အမွနျဆုံး ရှလေကျတှဲလကျထပျနိုငျဖို့ ဆုတောငျးပေးကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
Source : Thet Paing’s Facebook